Tesco 4 achịcha ọkụkọ achịcha 380G | Nzipu ahia otu ubochi - Lewisham Tesco 4 Breaded Chicken Steaks 380G– Ordrs
Tesco 4 Nri anụ ọkụkọ 380G
Achịcha na-edozi ụdị ara ọkụ n'ime mkpuchi achịcha.
Were ọnya nke steaks ọkụkọ anyị dị ụtọ nke ejiri 100% anụ ọkụkọ mee ma kpuchie ya na obere ogbe achịcha. Kpamkpam na-eri nri dị mfe na fries French, peas oyi kpọnwụrụ na squirt nke tomato ketchup zuru oke iji mee ndị na-eri anụ ahụ ụtọ. Azụkọ ọkụkọ ndị a kpụkọrọ akpụkọ na-esi nri naanị na 32 nkeji ma bụrụ nnukwu ihe nzacha friza ka a ga-enye gị n'ụzọ ọ bụla masịrị gị. Maka nhọrọ ka mma, belata anụ ọkụkọ wee tụba ya na salad Siza ọhụrụ nke nwere croutons na akwụkwọ letus. Ejiri 100% belata ma mechie ara ọkụkọ na-enweghị ihe nchekwa, flavors ma ọ bụ agba.
Mere na 100% ọkụkọ ara ntekwasa na crispy breadcrumbs
Ngwugwu ngwugwu: 380g